अर्थ / वाणिज्य Archives - सुदुर नेपाल
२१ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लिएको कर नीतिविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ । नेकपाका महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष रहबर अन्सारीको नेतृत्वमा वीरगञ्जको घण्टाघरमा अर्धनग्न प्रदर्शन गरिएको हो । अन्सारीको प्रदर्शनमा वीरगञ्जका युवा व्यापारीले साथ दिएका थिए । श्रमजीवी, व्यापारीसँग बाँकी लगाएको कपडा मात्रै हो त्यो पनि लिनुस् भनेर फुकालेर दिएको उनी बताउँछन् । ‘लकडाउनका कारण श्रमजीवि, जनता र व्यापारीसँग कर तिर्ने पैसा त छँदै छैन । भएको एक जोर
व्यवसायीको निर्णय:काठमाडौंमा बिहीबार ११ बजेसम्म सबै प्रकारका पसल खोल्ने
२१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंका व्यवसायीहरुले (बिहीबार) देखि बिहान ११ बजेसम्म पसल/व्यवसाय खुला गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका छन् । साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बिहीबारदेखि आधा दिन पसल/व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । महासंघका महासचिव अञ्जन शाक्यले बिहीबारदेखि बिहान ११ बजेसम्म पसलहरु खुला गर्ने निर्णय भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । पसलहरु खुला भए पनि नेपाल सरकारले तोकेको कोरोना संक्रमण फैलन
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल ज्येष्ठ २१ गते बुधबार इश्वी सन २०२० जुन ३ तारीख ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथी पश्चात त्रयोदशी तिथी स्वाती नक्षत्र बरीयान योग बणीज करण चन्द्रमा तुला राशिमा आनन्दादि योगमा धु्रम योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु प्रदोष व्रत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन
काठमाडौँ — सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ । अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उक्त
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सरकारले यस वर्ष ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर दिने जनाएको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वयंसेविकाहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिँदै यातायात खर्च दोब्बर बनाइने बताए । उनले स्वयंसेविकाहरुलाई स्थानीय तहमा सरसफाइ, स्वास्थ्य सचेतनाको परिचालन गरिने बताए । हाल नेपालमा ५२ हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेका छन् ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी
२ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरुको लागि १९ वटा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । ती १९ वटा कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २८ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख बजेट अनुमान गरेको छ । अन्य नियमित कार्यक्रम र चालु खर्चका लागि ५४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको छ । सरकारले महामारी तथा स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा
२ जेठ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी ए–३३० जहाजले आज जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टर्ड उडान गर्दैछ।नेपालमा रोकिएका केही जापानिज नागरिक तथा बिदामा आएका नेपाली कामदार र विद्यार्थी लैजानका लागि निगमको जहाजले नारितमा चार्टर्ड उडान गर्न लागेको हो। निगमको वाइडबडी जहाज आज राति ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नारिता उड्ने तालिका रहेको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिए।उनका अनुसार २५० यात्रु लिएर नारिता उड्ने वाइडबडी जहाज
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाले छटपटाएका व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । कोरोनाको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या नभएकाले त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यसको भारको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहतको आश गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । ‘कोरोनाको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या